တောကျောင်းနေ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး၏ ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းမေးမြန်း စကား | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » တောကျောင်းနေ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး၏ ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းမေးမြန်း စကား	9
တောကျောင်းနေ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး၏ ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းမေးမြန်း စကား
Posted by uzin on Jul 29, 2012 in Copy/Paste |9comments
“ဘုန်းတော်ကြီး ကြွလာတာ နေပူလိုက်တာ”
“သည်မှာ ခဏနားပါဦးဘုရား၊ ဘယ်ကိုကြွမလို့လဲဘုရား”
“ကောင်းတယ်ဗျာ၊ သည့်အနောက်ဘက်ကရွာကို ကြွမလို့ပါ”
“ဘယ်လိုအဆက်ရှိလို့လဲ” “အဲသည်ရွာက ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးလေးတို့ အကြီးတန်းမှာ ပဋ္ဌာန်း ချပေးခဲ့ရတယ်”
“ဘုန်းကြီးက တောင်မြို့မှာ ပဋ္ဌာန်းစာချပေးသူလား” “ဟုတ်တယ် စာချတစ်လျှောက်လုံး ပဋ္ဌာန်းစာ ချပေးခဲ့တာပဲ”
“တောင်မြို့မှာ စာမချတော့တာ ကြာပြီလား” “သိပ်မကြာသေးပါဘူး”
“ဘုန်းကြီး အသက် ငါးဆယ်လောက်ရှိရော့မယ်နော်” “ဟုတ်ပါတယ် အခုတော့ ပဋ္ဌာန်းသင်ယူ နိုင်သူလည်း သိပ်မရှိကြတော့ပါဘူး”
“ပဋ္ဌာန်းက သင်သူမရှိလျင် သိပ်ကြီးသုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးပဲ” “ဟုတ်တယ်”
“ဘုန်းကြီးကို လျှောက်ကြည့်ရဦးမယ်” “လျှောက်ပါ”
“ပဋ္ဌာန်းက တကယ်အသုံးချကြည့်တော့လည်း မရှင်းမလင်းကြီးနော် ဘုရား” “ရှင်းပါတယ်”
“ဘုန်းကြီးက ရှင်းတယ်ထင်တာလဲ ဖြစ်နေပါဦးမယ်ဘုရား” “မဟုတ်ပါဘူး”
“ဒါဆို တကယ်လား၊ အထင်လား ကွဲပြားအောင် တပည့်တော့ မေးကြည့်ချင်ပါတယ်” “မေးပါ”
“တပည့်တော် မေးခွင့်ပြုပါဘုရား” “မေးပါ”
“လူတွေဟာ ကံတွေကို အကောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ အဆိုးဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို ပြုကြတယ်၊ အဲသည်ကံတွေရဲ့ အကျိုးတွေလည်း ဖြစ်ကြတယ်၊ ဒါတွေ သည်ဘ၀မှာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ ပဋ္ဌာန်းနဲ့ ရှင်းပြနိုင်သလား ဘုရား”
“အင်း” “မိန့်ပါ” “ဘုန်းကြီး သိသလိုမိန့်ပါ”
“တကယ်တော့ ဟုတ်တယ်ဘုရား၊ ရှင်းသလိုလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့် မရှင်းဘူးဘုရားနော်”
View all posts by uzin →	Blog
KyawThein says: မရှင်းနိုင်ရင်လဲ ရှင်းနိုင်တဲ့ သူမေးပေါ့ 
ကြည့် ရတာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာအစစ်မဟုတ်နိုင်ဘူး
ပြဿနာသ်ိပ်မရှာနဲ့  ဒီထဲကကောင်တွေကိ်ုလဲ ချဉ်ဖတ်လို့ တော့ မထင်နဲ့ 
ဒီပို့ စ်ကိုကန့် ကွက်ပါတယ်
သန်းထွဋ်ဦး says: နည်းနည်းတော့ ရှင်းပြသင့်ပါတယ်ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2755
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီပိုစ့်မှာတော့
မိုးပြာခေါ် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီတွေ လုပ်နေကျပုံမျိုးနဲ့ တထပ်တည်းတူပါတယ်။
uzin says: ကျုပ်ရေးတာကတော့ တကယ့်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါး ပြောဆိုတာကိုရေးလိုက်တာပါ။ ပဋ္ဌာန်းကို မဟုတ်ဘူး၊ မမှန်ဘူး၊ သုံးမရဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ ဘုန်းကြီးနှစ်ပါး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုတာကို ရေးလိုက်တာပါ။
အခုလည်း ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို သင်ခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ တောကျောင်းဘုန်းကြီးတို့ ဆွေးနွေးတာလည်း ပဋ္ဌာန်းကျမ်း အပေါ်မှာ ဖြစ်တဲ့ သဘောထားဆွေးနွေးချက်ကို ဒီလိုဖတ်ခဲ့ကြားခဲ့ရတာကို တင်ပြလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ မိမိလက်ရှိ ယုံကြည်နေသော အယူအဆမှ မတိမ်းစောင်းစေလိုပါ။
San Hla Gyi says: ဆောင်းပါးရှင်ရေ
ဟိုဘက်ဆောင်းပါးမှာလည်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုလဲ ထပ်ပြောပါမယ်။ ဆောင်းပါးရှင် သူများတွေမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆောင်းပါးရှင်က အခုမှ သူများဆီက ကြားခဲ့ရတာလေးကို ပြန်ရေးပါတယ်လို့ ပြောတာကိုး။ ဒီဆိုက်ဒ်ရဲ့ စည်းကမ်းချက် နံပါတ် ၁၀ ကကိုယ်တင်တဲ့စာကို ကိုယ်တာဝန်ယူရ မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင်ရေးတာက အချက်အလက် အကြောင်းအရာပိုင်း မဟုတ်ပဲနဲ့ ပြဿနာ သို့ ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့ စာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစာမျိုးက ကိုယ်တိုင်တာဝန် မယူနိုင်ရင် မရေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်သဘောထား ပါရပါမယ်။ အခုဟာက ဆောင်းပါးရှင်က တပုဒ်လုံး ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်လို ရေးသွားတာပါ။ ပြဿနာဖြစ်မှ ကိုယ့်သဘောထား မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် သူများက ယုံဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်မဟုတ် ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါးရှင်ပြောတဲ့ သူများတွေ ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတွေက သိလဲမသိနိုင်သလို မြင်လဲ မမြင်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နောက်ကို သတိထားပေးပါ။ အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုစာတွေ ရေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 360
chityimhtoo says: uzin ဘာကိုရည်ရွယ်ချင်တာလည်း။သိပ်ဂျွတ်နေရင်လည်း တစ်ခါတည်းပေါက်မြောက်အောင်လုပ်ပြီးမှပြန်လာရှင်းပြ။
မာလိန်မှုး says: သွား လူဂျိုး အတည်အပေါက် နဲ့ တကယ်နောက်
ငရဲ မကြောက် ပြာပူ မကြောက်
မမ အညာသူ says: အော်
ဖိုးထောင် says: ဦးစံလှကြီးခေါ်သလို ခေါ်လိုက်မယ် ဆောင်းပါးရှင်ရေ ခင်ဗျားကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီး ရေးတဲ့ ပို့စ် ၂ ခုစလုံးရဲ့ ကြားခဲ့တဲ့နေရာ ကြားခဲ့တဲ့အချိန် ပြောကြားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ခင်ဗျားပြန်ဖြေပေးနိုင်လား မဟုတ်တရုတ် နဲ့ သာသနာဖျက်တော့လာမလုပ်နဲ့ ခင်ဗျားသာအမှတ်တကယ်ဆိုရင် အဲဒီဦးဇင်း(ပထမပို့စ်) နဲ့ ဒီဘုန်းကြီး တွေရဲ့ ဘွဲ့နာမည်ကျောင်းလိပ်စာရေးတင်ပြီးရှင်းလေဗျာ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လဲ လူလုံးထွက်ပြ လိုက် ယောင်တိယောင်တောင်လာမလုပ်နဲ့
Comments By PostCongress - ဦးဦးပါလေရာ - Admin Kaiအဟံ ပထမံ - Ma Ma - TNAတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - ဗုံ ဗုံ - Myo ThantTeach Your Toddlers with These Best Free Learning Android Apps - awra-choပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - Ma Ei - ခင် ခအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ - kyeemiteမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - Admin Kai - GaviaGirlကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - awra-cho - chitသို့ ချစ်သောဖေဖေ - kyeemite - Myo Thantရထား ထွက်တော့ မယ် - ခရီးသည်ကြီးဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - kyeemite - လူကလေးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် -etoneရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ei Kyipyar - Yin Nyine Nwayမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - panpan - ဦးကြောင်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - awra-cho - kyeemiteနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ကြည်ဆောင်း - Ei Kyipyarအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - kyeemiteဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - awra-cho - Kaung Kin Pyarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - သူကလေး - သူကလေးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - kyeemite - ဆူးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - kyeemite - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - သူကလေး - ခင် ခကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ခင် ခ - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - အလင်း ဆက်ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - kyeemite - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNAအတ္တဆန် - kyeemite - ခရီးသည်ကြီး``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - ဆူးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77850 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58573 Kyats )MaMa (57779 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...